बिश्व Archives - Janakhabar
काठमाडौं । रुसले युक्रेनको मारिउपोल सहरमा कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ । युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिउपोल कब्जा गर्न रुसी सेना निरन्तर लडिरहेको थियो । ५ सय ३१ युक्रेनी सैनिकले छोडेसँगै मारिउपोल सहर र स्टिल प्लान्टमा विजय प्राप्त गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हिजो त्यहाँ रहेका अन्तिम रक्षकलाई […]
काठमाडौं। नाइजेरियाली सेनाको कारवाहीमा करिब ४३ अतिवादी हतियारधारीहरू मारिएका छन् । गएको तीन सातायता जारी नाइजेरियाली सेनाको कारवाहीमा नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ती हतियारधारी मारिएका हुन् । नाइजेरियाली सेनाले केही साता यतादेखि सो क्षेत्रमा आतंककारीहरुका विरुद्धमा विशेष कारबाही अभियान सञ्चालन गरेको छ ।नाइजेरियाली सेनाका प्रवक्ता वर्नाड ओनियकुले दिएको जानकारीअनुसार सो क्षेत्रमा सेनाले गएका केही हप्तादेखि कारबाही […]
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु युरोपेली राष्ट्रहरूका लागि आत्मघाती कदम हुने चेतावनी दिएका छन । राष्ट्रपति पुटिनले एक टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । रुसमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकी राजनीति प्रेरित भएको जिकिर गर्दै उनले पश्चिमा राष्ट्रहरुले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन । केही युरोपेली राष्ट्रहरू उर्जाका […]
काठमाडौं । फिन्ल्याण्ड र स्वीडेनको नेटोमा आवद्ध हुने प्रयासमा टर्की बाधक बन्ने देखिएको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले ती दुई राष्ट्रले नेटोमा सामेल हुन गरेको अपील आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभएको हो । ३० सदस्यी संन्य गठबन्धन नेटोमा टर्की यसअघि नैं सदस्य रहेको छ । तर फिनल्याण्ड र स्विडेनले सदस्यताको अपिल गर्दा भने टर्की […]
उत्तर कोरियामा कोभिडबाट थप २१ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । उत्तर कोरियामा कोभिडबाट थप २१ जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर कोरियाले संक्रमण भएको घोषणा गरेको दुई दिनपछि २१ जनाको मृत्यु भएको हो। कोभिड संक्रमण देखिएपछि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार १ लाख ७४ हजार ४४० जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको थियो।
सुपरमार्केटमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । न्युयोर्कमा भएको गोलीकाण्डमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। बफेलो सहरमा भएको सो गोलीकाण्डपछि एक १८ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले उनको नाम भने खुलाएको छैन। गोली हान्नुअघि शंकास्पद व्यक्ति एउटा व्यस्त सुपरमार्केटमा शनिबार दिउसो प्रवेश गरेका थिए। एफबीआईले सोे गोलीबारीलाई ‘हिंस्रक अतिवाद’ भनेको छ।पछिल्लो गोलीकाण्डलाई जातीय उत्प्रेरित घृणा अपराधको रूपमा अनुसन्धान भइरहेको […]
पुटिनद्वारा फिनल्याण्डलाई नेटोमा आवद्ध नहुन चेतावनी
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले छिमेकी राष्ट्र फिनल्याण्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति पुटिनले फिनल्याण्डका राष्ट्रपति सौली निनिस्टोलाई टेलिफोन गरी नेटोमा आवद्ध नहुन चेतावनी दिएका हुन् । पुटिनले क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।स्वीडेनले नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने घोषणा गरेपछि फिन्ल्याण्डमा पनि नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा […]
महिलालाई महिनावारीको समयमा अतिरिक्त ३ दिन विदा !
काठमाडौं । स्पेनका महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा हुने पीडाका लागि स्पेन सरकारले हरेक महिनामा ३ दिन अतिरिक्त विदा दिने निणर्य गरेको छ । पश्चिमका देशहरूमा महिनावारीको समयमा महिलालाई यसरी विदा दिने पहिलो देश स्पेन हो । महिनावारीको समयमा हुने पीडाको लागि दिइने विदाको सीमा ३ दिन तोकिएको छ । स्पेन सरकारले आगामी सातादेखि देखि यी सुधारहरू […]
काठमाडौं । उत्तर कोरियामा कोरोनाको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएपछि किम जोङ उनले देशभर लकडाउन घोषणा गरेका छन् । उनले कोरोना रोकथामका उपायहरु बढाउन पनि निर्देशन दिए । यसका साथै निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न पनि भनिएको छ । कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले बिहीबार राजधानी प्योङयाङमा केही व्यक्तिको नमूना परीक्षण गरिएको जनाएको छ, जसमा कोरोनाको ओमिक्रोन […]
श्रीलंकाका निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष सेनाको शरणमा !
काठमाडौं । भयानक आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काका निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष आगजनी र आक्रमणबाट बच्न नौसेना आधार शिविरमा पुगेका छन् ।राष्ट्रपतिका दाइ तथा दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेका महिन्दा राजपक्षलाई उनको सुरक्षाको लागि पूर्वोत्तर श्रीलङ्काको एउटा नौसेना आधार शिविरमा राखिएको सेनाले पुष्टि गरेको छ । सोमवारदेखि जारी हिंसामा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब […]